Ini ndinokuvenga seni handina kumbobvira ndada chero munhu, nhetembo dzaLuis Ramiro | Zvazvino Zvinyorwa
Yakatumirwa muna 2015, Ndinokuvenga sezvandisina kumbobvira ndada chero munhu Iri ibhuku rekutanga renhetembo naLuis Ramiro, munyori wechiSpanish uye muimbi. Kunyangwe hazvo muimbi-munyori wenziyo weMadrid akatsaurira hupenyu hwake kumimhanzi, semunyori akakwanisa kuwana muunganidzwa wenhetembo pamusoro pechakanaka cherudo. Nenzira iyi, iye anoratidzira rwiyo basa kune veruzhinji kunze kwenzvimbo yemimhanzi, padyo nemazwi.
Mupfungwa iyi - kunyangwe munyori akazoburitsa mamwe mabhuku, rekupedzisira muna 2018 - iyi nhetembo kutanga yaive nekugamuchirwa kwakanyanya. Naizvozvo, chinyorwa ichi chinopa nzira kune chinyorwa chinyorwa chaLuis Ramiro uye nekudaro kuziva izvo zvinofadza vaverengi vake. Pairi yekupedzisira, zhinji nhetembo dzake dzinounganidza zvinosangana nevanhu vazhinji mumunda werudo.
1 Nezve munyori, Luis Ramiro
1.1 Hupenyu nemumhanzi
2 Kuongorora kwekuti ndinokuvenga kunge ndisina kumbobvira ndada chero munhu
2.3 Mamiriro asina kujairika
2.5 Nhetembo sorwiyo
Nezve munyori, Luis Ramiro
Luis Vicente Ramiro ndiro zita rekutanga remunyori uyu akazvarwa muMadrid, Spain, musi waApril 23, 1976. Kubva achiri mudiki airatidza kufarira kwounyanzvi, kubata, mukuwedzera pakutamba mabass, kunyora zviri pamutemo aine makore makumi maviri nematatu. In consecuense, Kutsungirira kwake kwakabhadharwa muna 2007, paakasaina naSony MBG kuti abudise dambarefu rake rekutanga rakanzi Kurangwa kudenga.
Kubva ipapo, akatoburitsa 7 albhamu, mamwe acho akagamuchira mibairo yakakosha uye kurumbidzwa. Saizvozvo, mumakonzati ake anga aine kubatana kwakapenya senge kwaLuis Eduardo Aute kana Pedro Guerra, pakati pevamwe. Nenzira imwecheteyo, muimbi akanongedzera kuna Joaquín Sabina, Bob Dylan kana maBeatles, pakati pekufurira kwake kukuru.
Kubva paakatanga kunyora zvinyorwa muna 2015, Ramiro akasaina mamwe mazita mashanu. Pane rimwe divi, chimiro chemuimbi weMadrid chinoratidza kuti akadzima miganhu pakati pemimhanzi nhetembo. Kuti aite izvi, akatora mukana wekuti wekare akamuperekedza kubva paudiki uye akachinja mazwi ake kuita nhetembo dzakanyorwa, dzinozivikanwa nenzira yekudyidzana.
Saizvozvo, muimbi wechiSpanish-munyori wenziyo akatevera nzira yekunyora umo mufananidzo unoburitsa nhetembo yake hupenyu hwake hwerudo. Saka, nhetembo dzake dzinotaura imwe yemisoro mikuru yevanhu, rudo, asi nechitambi chake. Mune mamwe mazwi, Ramiro haana chakaoma pakuisa hupenyu hwake sechinhu chisina kugadzirwa chekugadzira.
Nhasi, Luis Ramiro mutambi anoshanda kwazvo pasocial network, kwaanogovana zvake nhetembo nemumhanzi wake. Uye zvakare, akapa kuimba kwake pamapuratifomu edhijitari uye akachengetedza kuvepo kwakakosha mundima yehunyanzvi. Naizvozvo, nekushanyira account yake yeFacebook, semuenzaniso, veruzhinji vanogona kuziva nezve ake epamhanzi uye ezvinyorwa zvinyorwa.
Analysis of Ndinokuvenga sezvandisina kumbobvira ndada chero munhu
Mubhuku iri renhetembo muverengi anowana musanganiswa wemastylistic unobva kudiki-nhetembo kuenda kumhoneti. Uyezve, pane chinangwa chine rwiyo chinosiyaniswa nendima dzakarukwa dzinoita senge pfupi chiitiko cheakaundi account ine yakananga meseji. Nekudaro, nhetembo dzaLuis Ramiro hadzisi monolithic, nekusiyana, iri yakanyanyisa kuita uye kunyange nzira yekuyedza.
Iye zvino, iyo nzira yekunyora yeSpanish inoita kunge inotarisa pane zvemashoko enhetembo, asi chokwadi ndechekuti mafomu uye mutauro unosarudza. Sezvo kune mudetembi weIberia, akasiyana manzwiro anomubvumidza kuti aedze kuzadzisa mhedzisiro pane muverengi. Nezvikonzero izvi, musanganiswa wenhetembo musanganiswa chinhu chakasarudzika cheunganidzwa wenhetembo.
Ini ndinokuvenga zvandisati ndamboda ...
Ndinokuvenga sezvandisina kumbobvira ndada chero munhu inosanganisira kukura kukuru kwerudo uye kusuwa kwemoyo kunoswededzwa kubva kwakasiyana maonero. Kune rimwe divi, nekutsanangura rudo sekusimba uye kufa, kumisikidzwa kwebhuku kunowana nzvimbo yechimwe chidimbu chinoratidza. Kune rimwe divi, zvinogona kunzwisiswa kuti ndima dzinorwadza kwazvo, semuenzaniso, dzinozivisa mhando yekutsvaga kusati kwapera.
Mamiriro asina kujairika
Nezvekupokana kwakaratidzwa mundima yapfuura, hazvina kukodzera kusimbisa kuti nzira iyo Ramiro anoongorora nayo rudo nekushayikwa kwerudo ndeye tsika chaiyo. Muchokwadi, mazwi ake kukoka kuti uongorore chiitiko chevanhu chisingadzivisike icho chisinga tsoropodza mumwe munhu kunyanya.
Naizvozvo, icho (chiri pachena) chinangwa chemunyori ndechekusvika pachibvumirano cherudo uye zvisirizvo kubva pane zvakaitika kwaari. Eheka, hapana chikonzero chaanoda kugadzirisa pfungwa dzake sechokwadi chakazara, nekuti kuderera kwerudo zvakare kwakajairika chokwadi.
Chimiro dkuunganidzwa kwenhetembo kunosanganisira nhetembo dzinodarika zana; dzimwe dzadzo dzakakurumbira uye dzinogamuchirwa zvakafara. Imwe yeiyi idetembo "Kana zvinhu zvese zvaringana", Yakagadzirwa nemitsara yakaita seiyi:" Vakadzi vanopenga seni vanoita kuti ndive nepfungwa dzakanaka / unokonzeresa tsunami muhudyu mangu ". "Uye zvino kana iyo hondo yapera, / ini ndinocherekedza chokwadi chako chisina makeup, / uyezve rudo ndipo parunoputika."
Pakati penhetembo dzakatanhamara zvakakosha kucherechedza "Mukadzi wemaroto angu": "Akanga asiri iye mukadzi wekurota kwangu. / Chaive chinhu chiri nani: / Mukadzi wekumuka kwangu ”. Mune ino kesi, tarisa kumonyoroka uko pfungwa inotora mundima yekutanga kana uchiverenga iyo yechipiri, uye mhedzisiro yeyekupedzisira. Naizvozvo, zvinoitika nesimba rakapfavirira remanzwiro izvo mudetembi anoda kusimbisa nekuzivisa mune izvo zvaanotenda.
Pane kubheja nhetembo kwaLuis Vicente Ramiro, Pane chinhu chimwe chakaita kuti ive yakanyanya uye inokwezva kuruzhinji. Icho chiri pamusoro peiyo yakapetwa kaviri mukana wenhetembo dzake, nekuti munyori akashandura mamwe acho kuita mimhanzi (nemhedzisiro yakanaka kwazvo). Muchokwadi, Ramiro anokwanisa kuburitsa basa rekunyora kuita basa remimhanzi zvine hunhu hunoshamisa, hwakakodzera kurumbidzwa.
Iyo yekupedzisira, kunze kwekusanganisira chirevo chemudetembi, chinopa chinyorwa chinyorwa chinyorwa chinonakidza chechokwadi chakasiyana. Pamwe, havazi vese veruzhinji kana vashoropodzi vanoshandiswa kune urwu rudzi rwe mutambo vadetembi. Asi, pasina kupokana, huchokwadi hwayo hunofambisa hutsva hwakakosha kuti huzvitsaure pakati pevamwe vanyori venziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Ndinokuvenga sezvandisina kumbobvira ndada chero munhu
Iyo Alexandria Quartet